kugadzirwa kwemaitiro esimbi oxide yero
ne admin pane 20-07-29
Iron oxide yero iri yakajeka hupfu yero pigment. Kuwanda kwehukama kwaive 3.5. Makemikari zvimiro akatsiga. Iyo saizi kukura iri 0.01-0.02 μ M. Iyo ine yakakura yakatarwa nzvimbo yenzvimbo (ingangoita gumi yenguva yakajairika yesimbi oxide), yakasimba ultraviolet kutora, mwenje kuramba, mumhepo ...
Kune maviri makuru maitiro ekugadzira esimbi oxide tsvuku: yakaoma uye yakanyorova. Nhasi tichatarisa maitiro maviri aya. 1.Pakaoma nzira yekuoma maitiro ndeye echinyakare uye epakutanga iron oxide tsvuku yekugadzira maitiro muChina. Zvakanakira zvacho zviri nyore kugadzirwa maitiro, mapfupi maitiro ...
Iyo nyowani yesimbi oxide pigment yekugadzira base yeShijiazhuang Shencai pigment fekitori yakaiswa mukugadzirwa
Shijiazhuang Shencai pigment Factory yakavambwa muna 2003 Tine hombe Iron oxide pigment Production Base (Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd), iri muNingjin Salt Chemical Industrial Park, Hebei Province, inharaunda yemakemikari indasitiri paki, iri pamutemo mu kugadzirwa. Ndiine matatu pro ...